Wararka Maanta: Khamiis, Jun 14, 2012-Madaxweynaha Somaliland oo la kulmay Toddoba Maayar oo ka tirsan Magaalooyinka Waaweyn ee Somaliland
Sidoo kale, Maayaradda ayaa iyaguna warbixin ka siiyey madaxweynaha magaalooyinka ay maayarka ka yihiin iyo wixii u qabsoomay muddooyinkii u dambeeyey oo ay sheegeen inay hawlo badan u qabsoontay.
Sidaas waxa lagu sheegay war-saxaafadeed uu ku saxeexan yahay Afhayeenka madaxweynaha Cabdilaahi Daahir Cukuse, waxaanu u qornaa sidan: "Madaxweynaha Somaliland, Mudane, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay 7-da Maayer ee Magaalooyinka ay darajadoodu tahay A-da", waxaa intaas lagu daray "Kulankan oo daba socday kulan u Madaxweynuhu hore ula yeeshay Badhasaabada Dalka 05/06/2012."
"waxa uu Madaxweynuhu maayerada ka dhegaystay warbixin la xidhiidha hawlaha ay qaranka u hayaan iyo xidhiidhka wada shaqaynayd ee Hay’adaha Dawladda.Warbixintaa dheer waxay Maayiradu kaga warameen wax-qabadkooda labadii sanno ee ugu dambeeyey oo ay sheegeen inuu aad iyo aad uga badan yahay Sannadihii ka horeeyey waxaanay taa ku amaaneen Xukuumada Cusub ee uu hogaaminaayo Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo ay sheegeen in ay ka helaan Gacan qabasho u suurto gelisay dedaalka ay sameeyeen"ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka.
Sidoo kale waxa la sheegay in Maayeradu ay soo jeediyeen talooyin badan oo wax ku ool ah gaar ahaana khuseeya dhinaca nabad-gelyada iyo cadaalada.
Intaas kaddib wuxuu madaxweynuhu maayerrada uga mahad-celiyey talooyinka ay soo-jeediyeen iyo wax-qabadkoodaba, waxaanu kula dardaarmay inay halkaa ka sii wadaan dedaalkooda isla markaana ay indho gaara ku hayaan nabad-gelyada iyo cadaalada oo uu sheegay inay yihiin Aas-aaska Nolosha iyo Dawladnimadaba.
Madaxweyne Axmed Siilaanyo horana waxa uu kula kulamo sidan oo kale ah la yeeshay Badhasaabyadda gobolada Somaliland, kuwaas oo uu warbixin ku aadan goboladooda ka dhagaystay.